Relationship – Yay Thu Ma
Yay Thu Ma
၂၁ ရာစု ဇနီးကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ကြန်အင် လက္ခဏာ များ
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် တွေ့ကြ၊ ဆုံကြ၊ ချစ်ခဲ့ကြရင်တောင် တစ်ဘဝလုံးစာ လက်တွဲ နိုင်ဖို့အတွက် လက်ထပ် ဖို့ဆိုတာ ပိုမိုခဲယဉ်းပါတယ်။ လူ့ပြည် က အပ်တစ်စ င်းနဲ့ နတ်ပြည် က အပ်တစ်စင်း ဆုံနိုင်ဖို့ရာ ခဲယဉ်းသလိုပဲ။ လူနှစ်ယောက် ဖူးစာဆုံ မိဖို့ဆိုတာ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် တွေ့ကြ၊ ဆုံကြ၊ ချစ်ခဲ့ကြရင်တောင် တစ်ဘဝလုံးစာ လက်တွဲ နိုင်ဖို့အတွက် လက်ထပ် ဖို့ဆိုတာ ပိုမိုခဲယဉ်းပါတယ်။ လက်ထပ်...
လူတွေပြောနေတဲ့ ဒီချစ်ရေးချစ်ရာ (၃)ချက်ဟာ လုံးဝယုံကြည်နေဖို့မသင့်ပါ
ချစ်ရေးချစ်ရာ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် လူတွေပြောနေတဲ့ အချက်အလက်တွေက ဆုံးနိုင်မှာကို မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်တွေအတိုင်း လိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်နေရတာ သင့်အနေနဲ့ တကယ့် အချစ်စစ်ကို ရှာမတွေ့နိုင်သလို၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးနဲ့လည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ကဲ ဘယ်လောက်အာရုံနောက်စရာကောင်းသလဲ။ လူတွေယုံကြည်နေတဲ့ အချို့အရာတွေဟာ တကယ်တော့ ဘာမှအသုံးမ၀င်တဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောရင် သင်ယုံကြည်နိုင်မလား။ ဥပမာ ဒီအချက် (၃) ချက်လိုမျိုးပေါ့။ ၁။ တစ်ယောက်တည်းနေတာထက်စာရင် ချစ်သူရည်းစားရှိတာ...
သင်တွဲနေတဲ့ ကောင်လေးမှာ ဒီချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံမှ သူ့ကို ချစ်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ
တခါတလေ သင့်ဆီ ပုံမှန်လာလည်၊ ရုပ်ရှင်အတူကြည့်၊ စာအုပ်ချင်းလဲဖတ်၊ အတူလျှောက်လည်ပြီး သင့်ကို ကူညီပေးတဲ့ ကောင်လေးကို ဘာလိုခေါ်ရမှန်း ဇဝေဇဝါဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်အဖို့ သူ ဒီအချက်တွေလုပ်ဆောင်ပေမယ့် သူ့ကို ချစ်သူရည်းစားခေါ်လို့မရပါဘူး။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်သူရည်းစားအဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ ဒီ့ထက်မဖြစ်မနေလိုချက်အများစွာ ရှိပါတယ်။ အမှတ်သညာတွေ အရေးမကြီးပါဘူး။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုက အရေးကြီးပါတယ်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိဖို့အတွက် ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ပါ။ သူ့မှာ ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ ပြည့်စုံမှ သူ့ကို ချစ်သူရည်းစားအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ။ ခြေလှမ်းစတင်ခြင်း အစစအရာရာလုပ်ရမယ့်သူဟာ...
ဘ၀ခရီးလမ်းမှာ သူနဲ့လက်တွဲလျှောက်လှမ်းဖို့ ဖြစ်နိုင်၊မဖြစ်နိုင် ဒီအချက်ကလေးတွေသိထားဖို့လို
ကိုယ့်ချစ်သူကို သိပ်ချစ်လွန်းလို့ မြတ်နိုးလွန်းလို့ ရွှေလက်တွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ငါ့အပေါ် တစ်သက်လုံး သစ္စာရှိပါ့မလား၊ ချစ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုပြီး စိတ်ထင့်ကြရပါတယ်။ ကိုယ့်ကို သူဘယ်လောက်အနစ်နာ ခံတယ် သိစေဦးတော့ စိတ်ထဲ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကတော့ ရှိကြစမြဲပါ။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်ဘက်က သေချာသွားစေဖို့ စိတ်ရှင်းသွားစေဖို့ သင့်ချစ်သူကို ဒီလိုလေးတွေ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ၁၊ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်နဲ့ မပြေတဲ့အချိန် သူဘယ်လို သင့်ကို ဆက်ဆံသလဲ သတိထားကြည့်ပါ။ ဥပမာ...
ချစ်သူဟောင်းနဲ့ ပြန်လက်တွဲစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ
အချစ်ရေးမှာ တခါတရံ အချစ်ရေးဆက်ဆံမှု အဆုံးသတ်ပြီးတဲ့အချိန် အထီးကျန်ပြီး ဟိုအရင်ချိန်တွေ ပြန်လိုချင်မိတဲ့အချိန်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအထီးကျန်မှုတွေနဲ့ အချိန်ကုန်လွန်ပြီး ပြန်လက်တွဲဖို့ အချိန်ကောင်းလို့ ခံစားမိတဲ့အခါ ကသိကအောက်နိုင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ “ငါ သူမကို ဘယ်လိုစကားပြောမလဲ/ဘယ်လို ပြန်ရအောင် လုပ်မလဲ သို့မဟုတ် ငါဘာပြောရမှာလဲ” မိမိကိုယ်မိမိ မေးခွန်းထုတ်နေမိပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိပါတယ်။ သူမ ငါ့အပေါ် စိတ်ခံစားချက်တွေ ရှိသေးလား စသည်စသည်ဖြင့်ပေါ့။...
အိပ်ယာကနေထချင်ပေမယ့် မထနိုင်ပဲမကြည်မလင်ဖြစ်နေတာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
အသက်အရွယ်ထက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုသူဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း
ဆံနွယ်လေးတွေကို ပိုပြီးထူချင်သူတွေအတွက် လိုက်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်း
ဆံဖျားမှ ခြေဖျားအထိ လှပနေစေဖို့ လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ
လူငယ်တွေအနေနဲ့ စိတ်ညစ်စရာတွေများပြီး စိတ်ဓာတ်ကျလာပြီဆိုရင် လုပ်သင့်တဲ့အရာများ
အမျိုးသမီးများအတွက် အကောင်းဆုံး ရေမွှေး ၂၂ မျိုး
2015အတွက် အကောင်းဆုံး Makeup Brand ၁၀ မျိုး
သင့်ခြေဖ၀ါးလေးတွေကို ဘယ်လို အနားပေးမလဲ
ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို မေတ္တာနဲ့ပဲ တုံ့ပြန်တဲ့ အမွန်း
ချစ်သူ ရဲရင့်အောင်ရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ surprise ကြောင့် ဝမ်းနည်းပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
သက်မွန်ကရိုက်ကူးရေးလုပ်ရင်းနဲ့ မျက်ကြည်လွှာထိခိုက်မိထားတာကြာပြီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့စာချုပ်မျိုးဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်
သီချင်းဟောင်းအပုဒ် ၂၀ စုစည်းထွက်ရှိလာတဲ့ ဇော်ဝင်းထွဋ်စီးရီးသစ်
Alcohol aloe-vera Aye Myat Thu Baby Health beauty beauty-tips-for-face Beauty Tips Body Beauty Breast Cancer Exercise face mask Fashion Fashion Style Fitness For Men Fruit Fruits Hair Hair Care Hair Style Hair Treatment Hair Tutorial Health Healthy Honey Justin bieber Kylie Jenner losing weight Love Makeup Nails New Brief Pregnancy Health Relationship relationships Skin & Body Skin Care Skincare Sleeping Taylor Swift Teeth Thet Mon Myint vegetables weight loss Wine Su Khine Thein
Celebrities Fashion (47)
Celebrities News (320)
Hair & Nails (87)
Hair Tutorials (72)
Makeup Tutorials (60)
Nails Art Tutorials (18)
News Brief (754)
Skin & Body (308)
သင့်ရဲ့ရှိရင်းရှိအသက်ထက် ပိုပြီးနုပျိုစေဖို့ လိုက်နာပေးသင့်တဲ့ အချက်(၅) ချက်
မျက်ခုံးမွှေးဆွဲရာမှာ ပျိုမေတို့ လုပ်မိကြတဲ့ အမှားကြီး (၃) ခု
မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးတဲ့အခါ အသားအရေက ဘာလို့ မစိုပြေနေတာလဲ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆံပင်ညှပ်လို့ရတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
လက်သည်း ကို အိမ် မှာ ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ
ကျွန်မ . . . နှစ်သက်သော လက်သည်းနီဆိုးဆေးများ
Yay Thu Ma © 2018. All Rights Reserved.